Soomalida gobolka Ogaden oo dacwad ka dhan ah dalka Ethiopia u gudbiyey maxkmadda denbiyada caalamiga ah ee ICC – Radio Daljir
Soomalida gobolka Ogaden oo dacwad ka dhan ah dalka Ethiopia u gudbiyey maxkmadda denbiyada caalamiga ah ee ICC
Johns burg,Feb 15 -Jaaliyadda Somaliyeed ee Koonfur Africa ee ka soo jeeda gobolka Ogaden ama Somali-galbeed ayaa cabasho dacwad ah oo ka dhan ah dowladda Ethiopia u gudbisay maxkmadda denbiyada ee Caalamiga ah ee ICC ,waxana cabshadan ku socota ICC ay ku baaqaysaa in baadhitaan lagu sameeyo tacadiyada ay dowladda Ethiopia ku hayso dadka Somalida ah ee ku dhaqan gobolka Ogaden.
War rasmi ah oo la sii daayey salaasadii , oo ka soo baxay Jaaliyadda Somalida ee dalka Koonfur Africa ,kooxda u qareemayaasha warbaahinta Koonfur Africa, shabkada Muslimiinta ee dalkaasi , ayaa loogu baaqay maamulka maxkamadda denbiyadda ee Caalamiga ah ee ICC in ay baadhaan tacadiyada ka jira gobolka Somalida Ethiopia ee Ogaden.
Denbiyada ku duugan qoraalka loo gudbiyey ICC ayaa waxaa ka mid ah dil garsoorka ka baxsan ,xadhig aan loo meel-dayin ,kufsi, jirdil ,dadka oo la waayo ama qarsooma ,burburinta waxyaallaha asaaska u ah nolosha iyo gubista tuulooyinka iyo weliba burburinta xoolaha degaankaasi.
“Koonfur Africa waa dalka ugu wanaagsan oo laga diiwaangelinkaro dacwaddaaan cabshada ah marka loo eego qaanuunka iyo xushmadda bani-aadamka ,waxaan rumaysanahay in dowladda Koonfur Africa ay weli xusuusantahay wixii ku dhacay ee nidaamkii midab-takoorka , sida anagana na haysta ee xukunka dadka laga tirada badanyahay ee gobolkayaga ka jira? sidaasi waxaa Television-ka Al-jazeera u sheegay Maxamed Fadel C/laahi oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa arimaha gobolka Ogaden oo fadhigiisu yahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Africa.
Maxamed Fadel C/laahi ayaa sheegaya in aanay keliya doonayn in lagu baraarugo cadaalad-darrada ka jirta dhulkooda ,laakiin ay sidoo kale doonayaan in cadaalada la horkeeno kuwa denbiyadaasi geystay ,islamarkaana xasuuqa iyo denbiyada ka dhanka ah aadanaha laga joojiyo dadka gobolka Ogaden.
Cabashada loo gudbiyey maxkamada caalamiga ah ee denbiyadda ee ICC oo ka kooban todoba boqol oo bog ama page ayaa xanbaarsan daliilo .
Dadka Somaliyeed ee ku dhaqan gobolka bariga Ethiopia ee xuduuda la leh dalalka Kenya, Djibouti iyo Somalia, ayaa ah halka ay ka imanyaso xiisadda u dhexeysay Ethiopia iyo Somaliya.
Iyadoo gobolka Ogaden uu sharci ahaan yahay qayb ka mid ah dalka Ethiopia ayaa hadana dadka gobolka degani ay yihiin Somali ,waxana gobolkaasi in badan ka socday halgan gobanimo-doon ah, tan iyo markii Ethiopia ay halkaasi gacanta ku dhigtay sanadkii 1954.
Iyadoo Somalia ay dagaal sokeeye gashay sanadkii 1991dii ayaa gobolkaasi waxaa ka sii socday halgan iskacaabisn ah oo hubaysan oo ay wadday jabhadda wadaniga ah ee xoraynta Ogaden ee loo soo gaabiyo (ONLF), oo la asaasay sanadkii 1984.
Tan iyo sanadkii 2007, warbixno la helay ayaa muujinaya in kumanaan qof la dilay markii ciidamada Ethiopia wadeen hawlgalkii baaxadda-weynaa ee ka dhanka ahaa jabhadda ONLF.
Iyadoo hadaba qorshuhu uu yahay in shidaal laga soo saaro gobolkaasi ayaa waxaa kor u kacay muhiimadda Istaraatiijiyadeed iyo midda qiimaha dhaqaale ee uu leeyahay gobolkaasi.
Jaaliyadda Somaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Africa ayaa ku eedayneysa Ethiopia in ciidamadda dowladdu ay si qasab ah dad rayid ah dhulkoodii iyo xoolahoodii ugala wareegeen ,islamarkaana dadka loo diiday in ay guryahoodii ku noqdaan .
War saxaafadeed ay soo saareen Jaaliyadda dacwadda u qortay ICC ayaa lagu sheegay in illaa 20,000 (labaatan kun ) oo muwaadiniin Somali ah oo u dhalatay gobolka Ogaden ay ku jiraan illaa 200 ( laba boqol ) oo jeel oo ku yaalla meelo aan la garanayn oo fadhiisimo u ah ciidamada Ethiopia.
Jaaliyadda gobolkaasi ka soo jeedda ee Koonfur Africa ayaa sheegaysa in Hay?adda Laanqaydha cas ee caalamiga ah ee ICRC loo diiday in ay booqato jeelasha lagu hayo dadka xabsiyada ku jira.
Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa kor u qaaday walaaca ay ka qabaan tacadiyada lagu eedeeyey dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah aadanaha, waxana bishii hore ururka Human Rights Watch soo weriyey in boqolaal qof loo dhaadhiciyey xabsiyada sanadkii 2011kii ,islamarkaana dadkaasi ay khatar ugu jiraan in la jirdilo ama si xun loola dhaqmo.
“Human Rights Watch waxa ay sii wadaa in ay hesho warbixino la aaminikaro oo ku aadan xadhig aan meel-dayin iyo xad-gudubyo aad u xun oo lagula kacay taageerayaasha ONLF, dadkaasi tacadiyada lagula kacay waxaa lagu hayaa xabsiyo ku yaalla gobolka Somalida ee Ethiopia? sidaasi ayaa lagu sheegay warbixintii ururka Human Rights Watch ee la soo saaray sanadkan 2012.
Marka la eego kooxaha xuquuqda aadanaha, ururka Cafiska Caalamiga ee Amnesty International, ayaa soo weriyey in xad-gudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay ciidamada Ethiopia iyo ciidamo isbahaysi la ah ka wadaan gobolka.
Dowladda Ethioipia ayaa si weyn u adkaysay in la tago gobolka Somalida Ethiopia ee Ogaden ,waxana bishii December ee sanadkii hore denbi lagu helay 2 saxafi oo reer Sweden ahaa oo gobolkaasi galay ,iyagoo taageero ka helayey ONLF, waxana lagu eedeeyey in ay taageerayeen argagaxiso, islamarkaana ay ku xad-gudbeen madaxbanaanida siyaasadeed iyo xurmadda dhulka Ethiopia ,waxana lagu xukumay 11 sano oo xabsi ah.
Saxafiyiintaasi Swedish-ka ahaa oo si qarsoodi ah ku galay gobolkaasi ayaa doonayey in ay u kuurgalaan xad-gudubyada laga soo sheegayo gobolkaasi.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in saxafiyiinta reer Sweden ee Johan Persson?iyo Martin Schibbye ay gelayaan xabsi dhab ah, islamarkaana go?aanka maxkamaddu uu u adeegayo yoolka nabadda iyo ammaanka, sida ay soo tebisay wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ee AFP.
Ururada xuquuqda aadanaha iyo dowladda Sweden ayaa canbaareeyey go?aanka maxkamadda Ethiopia,waxana ay ku baaqeen in saxafiyiintaasi oo gudanayey shaqadoodii sharciga ahayd dib xoriyadoodii loogu soo celiyo.
Abdirashid Musse Sa’eed.